Key कुञ्जी वेबसाइट मेट्रिक कोटीहरू तपाई विश्लेषण गर्नु पर्छ Martech Zone
Key कुञ्जी वेबसाइट मेट्रिक कोटीहरू तपाई विश्लेषण गर्नुपर्दछ
सोमबार, अप्रिल 13, 2015 मङ्गलबार, जुन 16, 2015 जेन लिसाक गोल्डिंग
ठूलो डाटा को आगमन को बारे मा धेरै अलग कुराकानीको बारेमा ल्याएको छ विश्लेषण, ट्र्याकिंग र मापन मार्केटिंग। बजारका रूपमा, हामी पक्कै पनि हाम्रो प्रयासहरू ट्र्याकिंगको महत्त्व जान्दछौं, तर हामी के ट्र्याक गरिरहेको छौं र हामी के छैनौं भन्ने कुरामा हामी दंग हुन सक्छौं; के, दिनको अन्त्यमा, हामीले आफ्नो समय खर्च गर्नुपर्दछ?
शाब्दिक सयौं मेट्रिकहरू छन् जुन हामी हेरिरहेका छौं, म यसको सट्टामा तपाइँलाई पाँच कुञ्जी वेबसाइट मेट्रिक कोटीहरूमा ध्यान दिन र तपाइँको व्यवसायका लागि महत्त्वपूर्ण यी वर्गहरूमा मेट्रिक पहिचान गर्न प्रोत्साहित गर्दछु:
WHO तपाईंको वेबसाइट भ्रमण गर्नुभयो।
किन तिनीहरू तपाईंको साइटमा आए।
उनीहरूले तपाईंलाई कसरी फेला पारे।
तिनीहरूले के हेरे।
तिनीहरू कहाँ बाहिर निस्के।
जब यी पाँच कोटिहरू सरल बनाउँदछ जुन हामीले मापन गर्न खोजिरहेका छौं जब कोही हाम्रो साइटमा आउँछ, यो वास्तवमै धेरै जटिल हो जब हामी पहिचान गर्न कोशिश गरिरहेका छौं कुन मेट्रिक्स महत्त्वपूर्ण छ र कुनचाहिँ होईन। मैले भनेको छैन कि तपाई विविध प्रकारका मेट्रिक्समा ध्यान दिनुहुन्न, तर मार्केटिंगमा सबै भन्दा हामीले हाम्रो दैनिक कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ र यसको बदलामा हाम्रो रिपोर्टि, पनि गर्नुपर्दछ, ताकि हामी सूचनालाई पचाउन सक्छौं जसले हामीलाई मद्दत गर्दछ। रूपान्तरण रणनीतिहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
प्रत्येक वर्ग भित्र मेट्रिक्स
जबकि कोटीहरू धेरै आत्म-व्याख्यात्मक छन्, प्रत्येक वर्ग भित्र ट्र्याक गर्नु पर्ने मेट्रिक्स सधैं स्पष्ट हुँदैन। हेरौं प्रत्येक वर्ग भित्र विभिन्न प्रकारका मेट्रिकहरू हेरौं:
को: जबकि सबैजना आफ्नो साइटमा को को लागी को सही पहचान जान्न चाहानुहुन्छ, हामी सँधै त्यो जानकारी प्राप्त गर्न सक्दैनौं। जहाँसम्म, त्यहाँ आईपी ठेगाना लुकअपहरू जस्ता उपकरणहरू छन् जसले हामीलाई दायरा कम गर्न मद्दत गर्दछ। आईपी ​​लुकअपको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको यो हो कि कुन कम्पनीले तपाईंको साइटको भ्रमण गरिरहेको थियो। यदि तपाईं आफ्नो साइटमा कुन आईपीहरू भ्रमण गर्दैछ त्यसलाई ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसोभए तपाईं कसलाई पहिचान गर्न एक कदम नजिक हुनुहुन्छ। सामान्य विश्लेषण उपकरणहरूले सामान्यतया यो जानकारी प्रदान गर्दैन।
किन: किन कोही साईटमा आउँछन् व्यक्तिपरक हो, तर त्यहाँ मात्रात्मक मेट्रिक्स छन् हामी किन तिनीहरू हुन् भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्न प्रयोग गर्न सक्छौं। यी मध्ये केही समावेश: पृष्ठ भ्रमण, ती पृष्ठहरूमा खर्च समय, रूपान्तरण पथ (प्रगति जुन साइटमा तिनीहरूले भ्रमण गरेका पृष्ठहरू) र रेफरल स्रोत वा ट्राफिक प्रकार। यी मेट्रिक्सलाई हेरेर, तपाईं केही तार्किक अनुमानहरू बनाउन सक्नुहुन्छ किन तपाईंको साइटमा आगन्तुकहरू आए।
कसरी: कसरी एक वेबसाइट को आगंतुक भेटियो तपाइँ तपाइँको SEM वा सामाजिक प्रयास को सूचक हुन सक्छ। कसरी हेर्दा तपाईंलाई कसरी तपाईंको प्रयासहरू काम गरिरहेको छ र कहाँ छैनन् भनेर बताउँदछ, तर यसले तपाईंलाई मेसेजिंग सफल भएको कुरा पनि बताउँदछ। यदि कसैले तपाईंलाई गुगल खोजीबाट फेला पार्‍यो र तिनीहरूले तपाईंको लिंकमा क्लिक गरे भने, तपाईंलाई थाँहा हुन्छ कि तपाईंको भाषामा केही तिनीहरूलाई त्यसो गर्न बाध्य पार्‍यो। यहाँ प्राथमिक मेट्रिक्स यातायात प्रकार वा रेफरल स्रोत हो।
के: आगन्तुकहरूले के हेर्यो शायद यी कोटीहरू मध्ये सब भन्दा सिधा हो। यहाँ प्राथमिक मेट्रिक कुन पृष्ठहरू भ्रमण गरिएको थियो, र तपाईं वास्तवमै त्यो जानकारीको साथ धेरै निर्धारण गर्न सक्नुहुनेछ।
कहाँ: अन्तमा, जहाँ एक आगन्तुक बाहिर निस्किआएको उनीहरूले चासो हराउन भन्न सक्छन्। निकास पृष्ठहरूमा हेर्नुहोस् र हेर्नुहोस् यदि त्यहाँ कुनै पृष्ठहरू आउँदै छन्। पृष्ठमा सामग्री समायोजित गर्नुहोस् र आदर राख्नुहोस्, विशेष गरी यदि यो एक अवतरण पृष्ठ हो। तपाईं सामान्यतया त्यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ जुन एक आगन्तुकले सामान्यबाट जानकारी बाहिर निस्कन्छ विश्लेषण रूपान्तरण मार्ग सेक्सनमा गुगल एनालाइटिक्स जस्तै उपकरणहरू।
के तपाईं यी कोटीहरूमा प्रत्येकलाई हेरिरहनु भएको छ र डाटामा आधारित भएर तपाईंको सामग्री वा वेबसाइट समायोजित गर्दै हुनुहुन्छ जुन फिर्ता आउँदैछ? यदि तपाइँ तपाइँको वेबसाइटको प्रदर्शन मा मूल्याated्कन हुनुहुन्छ भने, तब तपाइँ हुनु पर्छ।
टैग: एनालिटिक्स मेट्रिक्सइनबाउन्ड मार्केटिङमेट्रिक्स
गुगलमा तपाईंको अर्गानिक खोज प्रदर्शन सुधार गर्नका लागि १ 14 सल्लाहहरू
बज, भाइरल वा मुख मार्केटिंगको शब्द: के फरक छ?